NeoKylin: iyo chaiyo Chinese kopi yeMicrosoft Windows XP | Linux Vakapindwa muropa
China isimba hupfumi hwazvino, asi zviri zvakare maererano nehunyanzvi. Nyika yeAsia iri kugovera zviwanikwa zvakawanda kuti zvione kufambira mberi uye kugona kukwikwidzana nedzimwe nyika. Isu tinoona muenzaniso mune mafoni efoni anouya kwatiri kubva kuAsia hofori, kana iyo supercomputer ine simba kwazvo pasi iyo inokwira pamusoro peye TOP500 runyorwa, iri zvakare mumaChinese maoko.
Nezve mashandiro ehurongwa, havadi kusiiwa vachikwikwidzana neUS, kunyangwe iri kugoverwa kweLinux, maChinese akaita zvakawanda kugadzira rakanyanya uye rakasarudzika system iyo inotiyeuchidza nezveWindows XP. Iye zvino sezvo Microsoft yabvisa rutsigiro rwayo, inogona kunge iri nhanho yakanaka kumberi kune vashandisi munyika iyoyo yekuchinjira kune ino sisitimu uye kuva ne distro umo makwese ese ehurumende yeUS uye NSA akadzimwa.
Iyo distro yatiri kutaura nezvayo inonzi NeoKylin, iro zita rinouyawo kubva kuquilins, zvimwe zvisikwa zvengano zveAsia. Asi NeoKylin yakagadzirirwa kushandiswa kwehurumende. Pamusoro pezvo, China yakarambidza Windows 8 uye nekudaro mamwe mavhezheni akagadziridzwa pamakomputa ehurumende. Kugadzirira kushomeka uku, ivo vakagadzira ino sisitimu ine interface inonyatso kufemerwa neWindows XP, kana zvisiri kutaura kuti zvakada kufanana: tanga menyu, ma icon, desktop, taskbar, My Computer, My Documents, Tsvina , nezvimwe.
China Standard Software ndiyo kambani inotarisira kuigadzira pasi peiyo Unix standard uye pamwe zvichibva paFedora seYellowdog Kugadziridza Yakagadziridzwa iripo. Uye ivo havana kungotarisira chitarisiko kuti fanane neyaMicrosoft, asi zvakare zvimwe zvinhu zvakaita sekubatanidzwa kweBusaminas, Solitaire, nezvimwe, izvo zvinoiswa nekumisikidza pamwe nezvimwe zvirongwa zvakaita seGIMP neFirefox. Uye kana izvo zvanga zvisina kukwana, ine hofisi yayo yekugadzira suite yakafuridzirwa neMS Office, inonzi NeoShine Hofisi ine fungidziro yakafanana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » NeoKylin: iyo Chinese kopi yeWindows XP
"... kuti ndikwanise kuve ne distro mune zvese nzwara dzehurumende yeUS uye NSA dzakadzimwa." Ehe, kumaChinese kunofanirwa kuve zororo rakakura kuve nekungonetsekana nezve nzwara dzehurumende yavo. Ndeipi mikana yatinorasikirwa kunyarara.
Ehezve, hurumende yeChinese haina kuzivikanwa nekusununguka pazvivi uye zvirokwazvo inosora sezvinoita Spain, seFrance, Germany, nezvimwe. Sezvo masangano enjere uye espionage asiri nyaya yenyika imwe ... Kusvikira padiki kana padiki, kuregedza kodzero kana kwete ... Ini handipinde mune izvo. Zvaaireva ndezvekuti hurumende yeChinese inodzivirira "kuita kuti zvive nyore" kuti veAmerica vawane ruzivo. Chimwe chinhu ndechekuti ivo vanoita zvimwe chete kana kurega kuzviita nevagari vega kana nedzimwe nyika. Saka mukana wekunyarara ... pamwe ndarasikirwa nevamwe muhupenyu hwangu, hapana akakwana, asi ini ndinofunga izvi hazvizove zvakadaro.
yakagadzirwa muchaina: Huya, chichava chidhori kutevedzera maitiro avanoita zvese
China yakanyanyisa, inongova simba kana zvasvika pakutevedzera zvinhu
Nyika dzakaita seIndia dzinogona kunge riri iro ramangwana (ndinotaura nezveavo vari mune yakachena boom)
Kuziva kwangu kune zviratidzo zvekuve neChina sesimba renyika rinogona kuitika mune ramangwana ... (ona Xiaomi, pe). Uye kana iwe ukatarisa zvigadzirwa zvaunotenga, zvinosuruvarisa kunyangwe nyowani nyowani maPhones (kana chero imwe) akaunganidzwa ipapo kana zvikamu zvinogadzirwa ipapo. "Yakagadzirwa muChina" inodhindwa pane yakawanda yezvigadzirwa zvemarudzi ese.
Ehe India inofanirwa zvakare kutarisirwa, handirambe.
Alberto Nuncira akadaro
China yatova pakukwirira kwebudiriro, hazvizove nguva refu zvisati zvave zvakare, ivo millennia pamberi pedu. Zvinhu zvakaita sebepa, kudhinda, pulp, pfuti, kambasi, nezvimwe. izvo zvigadzirwa zveChinese ...
Pindura alberto nuncira
OneDrive inowedzera mumwe unofficial mutengi weLinux